I-ESRI - iGeofumadas
U-Esri usayina imemorandamu yokusebenzisana ne-UN-Habitat
U-Esri, umholi womhlaba kwezobunhloli bendawo, umemezele namuhla ukuthi usayine isivumelwano sokusebenzisana (i-MOU) ne-UN-Habitat. Ngaphansi kwalesi sivumelwano, i-UN-Habitat izosebenzisa isoftware yakwa-Esri ukwenza isisekelo sobuchwepheshe besisekelo sefu esisuselwa emafini ukusiza ukwakha amadolobha nemiphakathi ebandakanya wonke umuntu, ephephile, eqinile futhi esimeme emhlabeni wonke ezindaweni ...
U-Esri ushicilela iNcwadi KaHulumeni Ebukhali kaMartin O'Malley
U-Esri umemezele ukushicilelwa kwe-Smarter Government Workbook: Umhlahlandlela Wokusetshenziswa Kamasonto Ayishumi Nane Wokulawulwa Kwemiphumela ngowayengumbusi waseMaryland uMartin O'Malley. Le ncwadi isusa izifundo ezisencwadini yakhe yangaphambilini, uHulumeni Ohlakaniphile: Ungayibusa Kanjani Imiphumela ku-Information Age, futhi ngamafuphi iveza uhlelo lokusebenzisana, olulula ukulandela ...
ArcGIS-ESRI, Blog, Cartografia, Leisure / ugqozi
I-Digital Twin - BIM + GIS - imigomo ezwakale engqungqutheleni ye-Esri - iBarcelona 2019
IGeofumadas ibilokhu ihlanganisa imicimbi eminingana ehlobene nesihloko ukude futhi mathupha; Siwuvala lo mjikelezo wezinyanga ezine wezi-2019, ngokuhambela iNgqungquthela Yomsebenzisi ye-ESRI eBarcelona - eSpain eyabanjwa ngomhlaka 25 Ephreli e-Institute of Geology and Cartography of Catalonia (ICGC). Isebenzisa i-hashtag # CEsriBCN,…
Lapho sibona ukusebenza kwe-Smart Campus kwe-ArcGIS, kunemisebenzi efana nemizila yokuhamba phakathi kwedeski ezingeni lesithathu lebhilidi leProfessional Services kanye nelilodwa e-Q Auditorium, njengomphumela we-cadastre yangaphakathi nokuhlanganiswa kwedatha ye-BIM, siyazithola qaphela ukuthi ukuhlanganiswa kwe ...
ArcGIS-ESRI, Ukufundisa CAD / GIS
Imiphumela yenguquko kusuka ku-ArcMap kuya ku-ArcGIS Pro
Uma kuqhathaniswa nezinguqulo zeLifa le-ArcMap, i-ArcGIS Pro uhlelo lokusebenza olunembile nolusebenzisanayo, lwenza lula izinqubo, ukubonwa, nokuzivumelanisa nomsebenzisi ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sayo esenziwe ngokwezifiso; ungakhetha ingqikithi, ukwakheka kwemodyuli, izandiso, futhi akudingeki ukhathazeke ngokukhipha ngaphambilini lapho kunesibuyekezo esisha. Yini enye esingayilindela ...
I-ArcView ESRI umbono wami wokuqala
I-UNIGIS WORLD FORUM, uCali 2018: Okuhlangenwe nakho kwe-GIS okucacisa nokuguqula inhlangano yakho
I-UNIGIS Latin America, iUniversität Salzburg kanye ne-ICESI University, banokunethezeka okukhulu kokuthuthuka kulo nyaka, usuku olusha lomcimbi we-UNIGIS WORLD FORUM, uCali 2018: Okuhlangenwe nakho kwe-GIS okuchaza nokuguqula inhlangano yabo, ngoLwesihlanu, ngoNovemba 16 e ICESI University -Auditorio Cementos Argos, eCali, eColombia. Ukufinyelela kumahhala. Ngakho…
ArcGIS-ESRI, Cartografia, Ukufundisa CAD / GIS, Geospatial - GIS
Izifundo ezinhle ze-ArcGIS
Ukulawula isoftware yezinhlelo zolwazi lokuma kwezwe cishe akunakugwenywa namuhla, noma ngabe ufuna ukwazi kahle ukukhiqizwa kwedatha, ukwandisa ulwazi lwakho ngezinye izinhlelo esizaziyo noma uma unentshisekelo kuphela ezingeni lokuphatha ukwazi isiyalo okuso inkampani yakho ethintekayo. I-ArcGIS iyi ...
I-ArcGIS - Incwadi Yezithombe
Lo ngumbhalo onothisayo otholakala ngeSpanishi, nokuqukethwe okubaluleke kakhulu, ngokomlando nangokobuchwepheshe, maqondana nokuphathwa kwezithombe ezifundisweni ezihlobene nesayensi yomhlaba kanye nezinhlelo zolwazi lwezwe. okuqukethwe okuningi kunama-hyperlink kumakhasi lapho kunokuqukethwe okusebenzisanayo. I…
ArcGIS-ESRI, Ukufundisa CAD / GIS, Okufakiwe, Geospatial - GIS
Ugqozi - Amathrendi kubuchwepheshe be-GIS - usuku lokuqala lwe-ESRI UC
U-2005 kwaba okokuqala ngqa ukuya engqungqutheleni yabasebenzisi be-ESRI, ehlala njalo endaweni efanayo: ISan Diego Convention Center, namabhanela amakhulu alenga emakhothameni wephaseji ende yengilazi ecacile. Ukushayisana nama-Arabhu ngezintshebe ezinamathelayo namajazi amhlophe, ama-brunettes avela ezwenikazi lase-Afrika emomotheka ...
Izifundo eziyi-9 ze-GIS eziqondiswe ekuphathweni kwemithombo yemvelo
Ukunikezwa kokuqeqeshwa okuku-inthanethi nobuso nobuso ezinhlelweni ze-Geo-Engineering kuningi namuhla. Phakathi kweziphakamiso eziningi ezikhona, namhlanje sifuna ukwethula okungenani izifundo eziyisishiyagalolunye ezivelele ngendlela yokuphathwa kwemithombo yemvelo, ngezinkampani ezintathu ezinikezwa ukuqeqeshwa okuthakazelisayo. Isikhungo Sezemvelo ...
AutoCAD Yiqiniso ESRI Masters QGIS
Ukufundisa CAD / GIS, Geospatial - GIS
I-MappingGIS Courses: okungcono kunazo zonke.
I-MappingGIS, ngaphandle kokusinika i-blog ethokozisayo, igxila kwimodeli yayo yebhizinisi ekunikezweni kokuqeqeshwa okuku-inthanethi ezindabeni zomongo we-geospatial. Ngo-2013 kuphela, abafundi abangaphezu kuka-225 bathatha izifundo zabo, okuyinani elibonakala kimi likhulu, uma ngicabanga ukuthi lo mzamo ulele kosomabhizinisi ababili abaqale lokhu esikhathini esedlule ...
ArcGIS-ESRI, Ukufundisa CAD / GIS, Geospatial - GIS, qgis, eziningana
Amanzi namabalazwe. Nge
U-Esri Spain wethule umkhankaso onentshisekelo woSuku Lwamanzi Lomhlaba, nokwethulwa kwewebhusayithi i-aguaymapas.com ephepheni esilicasulile kancane kule ndatshana. “Ngesikhathi seWorld Water Day, sisuka e-Esri Spain sifuna ukukhombisa ukuthi isomiso sezinyanga ezedlule siyithinta kanjani imithombo yethu yamanzi. Siyakholwa ...
I-ESRI yethula uhlelo oluthile ukwenza i-GIS ifinyeleleke kalula kubafundi baseyunivesithi
U-Esri unikeza i-ArcGIS yabafundi uhlelo olukhethekile olunezindaba zakamuva nentuthuko kubuchwepheshe bokuhlaziywa kwezindawo kwabafundi basekolishi. Ukuqhubeka nokusetshenziswa kobuchwepheshe be-Esri emaNyuvesi kanye nezidingo ezikhethekile nemibandela yabafundi, kwenze u-Esri ...